GTA: San Andreas paUnited uye neLinux rutsigiro (zvisina kufanira) | Linux Vakapindwa muropa
GTA: San Andreas paUnited uye neLinux rutsigiro (zvisina kufanira)
Iwe zvechokwadi unoziva iyo GTA: San Andreas vhidhiyo mutambo, ndiko kuti, rimwe remazita e Grand Theft Auto saga iro rakabudirira kwazvo. Zvakanaka, uyu mutambo wevhidhiyo weRockstar wakaburitswa muna2004 neiyo RenderWare mifananidzo injini. Iyo inopa guta hombe raunogona mauri mune rwakawanda rusununguko rwekuita. Avo vakatotamba vachaziva. Dambudziko nderekuti iri zita raivepo kune mamwe mapuratifomu, kunyangwe ichigona kuiswa paLinux uchishandisa Waini.
Asi ikozvino pane nhau dzakanaka, uye ndiyo iyo GTA: San Andreas iri kuitirwa kuti ishande pa Kubatana grafiti injini. Injini yatakatotaura nezvayo yakawanda muLxA its linux rutsigiro. Mhedzisiro yacho ichave "yakavandudzwa" mutambo wevhidhiyo nerutsigiro rwekuti ushandise natively pane yako GNU / Linux distro. Uye kunyangwe iri mutambo wevhidhiyo kubva makore mashoma apfuura, ichiri kufarirwa kwazvo nenhamba huru yevatambi.
Iyo purojekiti haisi kuenda nekukurumidza, asi iri kuvimbisa, uye ivo vanogona kuunza mimwe mitambo mune ramangwana (vamwe kubva ku GTA dzakateedzana). Kana iwe uchida rumwe ruzivo iwe unogona kuona saiti yeprojekiti iyi mukati GitHub. Shanduko kuUniity inonakidza kuunza mamwe mapuratifomu akatsigirwa, uye vari kuunza iyo maitiro evazhinji. Zvakare, chirongwa ichi chiri pasi peMIT yakavhurwa sosi rezinesi, kunyangwe chirongwa ichi maererano ne "kuvhurika" chakati kurei.
Rega nditsanangure, kutamba uyu mutambo wevhidhiyo iwe ungazoda kopi yeiyo yekutanga GTA: San Andreas, uye kushandisa chirongwa ichi kugona kuchimhanya natively paLinux. Icho chinhu chakajairika nerudzi urwu rwezviteshi sezvataona zvakare mune mamwe mazita atatotaura nezvawo pano. Zvakare, Kubatana iwe unotoziva kare kuti haisi yakavhurika sosi, asi kuti ndeyayo uye yemahara. Saka usatarisira chimwe chinhu chakasununguka kana yakavhurika sosi yezvikonzero zviri pachena, asi inhau dzakanaka kuti inogona kutambwa kubva kuLinux ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » GTA: San Andreas paUnited uye neLinux rutsigiro (zvisina kufanira)
Apple Music inowanikwa kubva kubhurawuza. Inogona ikozvino kushandiswa paLinux uye FreeBSD
Chimiro muRust chinogona kuitwa muKernel kusimudzira madhiraivha